कमलपोखरीको २४ रोपनी जग्गा गायब ! – www.agnijwala.com
कमलपोखरीको २४ रोपनी जग्गा गायब !
काठमाडौं : साविक काठमाडौं–१ स्थित कमलपोखरी अतिक्रमणको सिकार भएको छ । प्रहरी, सडकदेखि सर्वसाधारणले कमलपोखरी अतिक्रमण गरेका छन् । ४८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमलपोखरीको क्षेत्रफल हाल आधा पनि छैन ।
गुठी संस्थान पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका महर्जनले राजनीतिक प्रभाव, कर्मचारीको मिलोमतोमा ‘भीम जुजु’को नाम चिनिने कमलपोखरी खुम्चिएको बताए । महर्जनकै अगुवाइमा २०४२ सालतिर कमलपोखरीसहित काठमाडौंमा रहेका पोखरीको विवरणसमेत संकलन गरिएको थियो ।आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।